Yintoni igama lomsebenzisi kwi-Instagram ▷ ▷️ Abalandeli ▷ ➡️
Julayi 10, 2019 0 IiCententarios 1161
Abantu abaninzi bayazibuza yintoni igama lomsebenzisi kwi-Instagram, kwaye zimbini izinto ezahlukeneyo. In Instagram, uya kufumana iinketho ezimbini xa usenza iakhawunti, eyokuqala igama lakho kunye negama lakho lomsebenzisi. Ke yintoniyintoni igama lomsebenzisi kwi-Instagram nyani? Yeyona uyifumanayo ehamba no "@".
Yiyo loo nto, xa omnye umntu ekubuza yintoni igama lomsebenzisi kwi-InstagramKuya kufuneka usebenzise le uyenzileyo usebenzisa i- @. Kwakhona, uya kudibana neemeko apho igama lomsebenzisi olifunayo alifumaneki; Sebenzisa ubuchule bakho ngokudibeneyo neesimboli kunye neenombolo ukufumana olona khetho.
Yintoni igama lomsebenzisi kwi-Instagram? Khetha eyona ilungileyo!
Akukho mfihlo kuye nakubani na ukuba igama elilungileyo kwi-Instagram linokukonyusa kakhulu, zombini ukukhangela abalandeli kunye nokuphumelela ngakumbi kunye nodumo ngeakhawunti yakho okanye uphawu lomntu. Oku kukubonelela ngentengiso kunye nezibonelelo zemali.
Ngoku, ngako konke ukunyuka kwezonxibelelwano zentlalo kunye nokuba yonke imihla kunabasebenzisi abaninzi, ukufumana nokukhetha igama elihle kuya kusiba nzima. Kungenxa yoko, ukufumana yintoni igama lomsebenzisi kwi-Instagram Kubalulekile xa unyusa i-akhawunti kunye nophawu. Igama elilula nelifumaneka lula liya kukunika izibonelelo ezilungileyo.
Ukuba uyazibuza ukubaluleka kokwazi yintoni igama lomsebenzisi kwi-Instagram. Apha siyakuxelela! Igama lakho kwi-Instagram liya kuba libalulekile xa usenza iakhawunti. Kungenxa yokuba iya kuba yinto yokuqala abasebenzisi abaya kuyibona ngokubambisana nefoto yakho kunye ne-biography ngokubanzi.
Ke ngoko, kuya kufuneka ujonge ekwenzeni iprizenteyiki engakholelekiyo kunye nenokubakho efanelekileyo ekuvumela ukuba utsala abasebenzisi abaninzi ngokusemandleni. Nje ukuba yenziwe, uyakufumana utyelelo olungcono kunye nabalandeli abaninzi kwiakhawunti yakho okanye uphawu lomntu.
Yintoni igama lomsebenzisi kwi-Instagram ebonisiweyo? Iingcebiso
Into yokuqala ekufuneka uyiqwalasele luhlobo lweakhawunti oya kuyila. Ngokusekwe koku, unokuqhuba ukhetho olwanelisayo kakhulu lwegama lakho lefayile okanye uphawu lomntu kwi-Instagram.
Phakathi kweenketho zeakhawunti ezinikezwe liqonga oya kuzifumana: uphawu lomntu, uphawu lomntu, ishishini kunye nolonwabo okanye iakhawunti yendlela yokuphila. Ukuba awuyazi yintoni igama lomsebenzisi kwi-Instagram kufanelekile ngakumbi; Okulandelayo, siya kukunika iingcebiso ezininzi ukuba ukhethe eyona ilungele eyona nto uyifunayo:
Le nto iya kufumana ingqalelo enkulu kubasebenzisi. Ukuyila izinto kuyakwenza ukuba ubonakale kwezinye iiakhawunti okanye iibrown. Kufuneka kuqatshelwe ukuba ngenani labasebenzisi ababhalisa imihla ngemihla eqongeni, kuya kuba kubalulekile ukuba ukhethe igama lokoqobo nelokubetha.
Ukwenza oku kufuneka ukhethe igama lomsebenzisi elinxulumene nento oyipapashayo, okanye injongo yopapasho lwakho. Ngale nto, uya kukwazi ukufikelela kwifuthe elingcono kwicandelo apho ufuna ukuphucula khona, ukongeza ukuba uya kuba nakho ukubamba umdla wabanye abasebenzisi.
Kule nto yintoni igama lomsebenzisi kwi-Instagram, kungcono ukhethe elula. Oku kuyakuvumela ukuba wenze igama lakho lomsebenzisi ulikhumbule kwaye ngenxa yoko ukufikelela kubantu abaninzi. Sicebisa ukuba usebenzise umbono wakho wokudala igama elithi i-hook, lilula kodwa kwangaxeshanye wenza umahluko.
Yintoni ofanele uyiphephe: Nika ingqalelo!
Sisendleleni yokwazi yintoni igama lomsebenzisi kwi-Instagram ezikuthanda kakhulu, kukho izinto onokuthi uzikhusele kuzo zonke iindleko. Okulandelayo, siza kukubonisa ezona mpazamo ziqhelekileyo ongafanele kuzenza:
Iimpawu eziphakathi kwegama: iisimboli ziyinkimbinkimbi ukuzikhumbula, ngakumbi xa zihamba ngolandelelwano oluthile, zithintele! Abantu bahlala benobuvila bokufunda iisimboli.
Amanani mde kakhulu: ukuba iisimboli kunzima ukukhumbula, khawufane ucinge amanani. Ukuthintela ukudideka kwabasebenzisi bakho kungcono kunokulahlwa; Zinokubangela iingxaki xa ufumana abalandeli.
Amagama Brand: ukuba awuyongophawu lophawu, sicebisa ukuba ungasebenzisi amagama ubhekisa kwinto enye.
Abalinganiswa abaRandom: Njengoko besesitshilo ngaphambili, injongo kukugcina igama lakho lilula kwaye kulula ukulinkqaya. Okwangoku xa ubeka iileta kunye neesimboli ezingahleliwe, kuya kuba nzima kakhulu kubasebenzisi ukuba bafunde igama lakho ngokuchanekileyo.
Igama lam lomsebenzisi alifumaneki: Ndenza ntoni?
Elinye lawona matyala axhaphakileyo xa usenza igama lakho lomsebenzisi kukuba waziswa nento yokuba sele isetyenzisiwe. Ke ngoko, kuya kufuneka wenze uninzi lobuchule bakho ukufikelela igama lomsebenzisi elikhoyo. Emva koko, siya kukunika iingcebiso ezithile onokuzisebenzisa.
Njengokhetho lokuqala kwaye, kwimeko yokuba udale iakhawunti yegama lakho okanye inkampani unokufaka ulwimi ekugqibeleni kwegama lomsebenzisi. Kananjalo, ungongeza indawo okanye indawo yendawo osebenza kuyo, oku kuyakuvumela umahluko kwiakhawunti yakho nakwezo ezifanayo.
Ngoku, ukuba iprofayili yeyenkampani, ungasebenzisa udidi oluzinikezela (i-spa, ihotele, indawo yokutyela, umlungisi weenwele, phakathi kwabanye), ukuze abasebenzisi bakwazi ukwahlula kwezinye.
I-Instagram: Ungatshintsha njani igama lomsebenzisi?
Nokuba emva kokudala iakhawunti yakho, uyazisola ngegama lomsebenzisi olikhethileyo, nantsi isisombululo! Ngapha koko, kuyinto eqhelekileyo ngokupheleleyo ukubhaqwa ngegama elinye lomsebenzisi. Ukuba kunokubangela ukuba utshintshe, okanye uze negama lokuyila nelinobuchule ngakumbi, qhubeka ufunda le post.
Ukwenza oku, siya kukunika yonke into oyifunayo ukuze uyiguqule ngendlela elula ngamanyathelo ahlukeneyo. Hlala ubukele zonke iimpawu!
Unokuba nomdla: Uyifumana njani kwakhona iakhawunti ye-Instagram? Iingcebiso kunye namaqhinga
Amanyathelo okutshintsha igama lomsebenzisi
Nangona kuvakala kuyinkimbinkimbi, ukuguqula igama lomsebenzisi ngokupheleleyo kwi-Instagram kulula. Nangona kunjalo, kuya kufuneka ukhumbule ukuba unokutshintsha kuphela igama lomsebenzisi, hayi igama le-akhawunti yakho. Ukwazi oko, igama lomsebenzisi lelona livela phezulu kwiprofayili yakho.
Nje ukuba oku kucacisiwe apha ngasentla, kufuneka ufake iakhawunti yakho ye-Instagram ngokubeka yonke idatha ehambelanayo. Nje ukuba ungene ngokulandelelana, kuya kufuneka ukhangele i icon yephrofayli ese kwikona esezantsi ngasekunene uze ungene kwizicwangciso zakho zeprofayili.
Ngoku ekubeni ukwi-akhawunti yakho, kuya kufuneka ukhethe u "hlela iprofayile yakho". Oku kuya kukunika ukufikelela kwimenyu yonke yeendlela onokuyiguqula, apho uya kufumana khona igama lomsebenzisi le-Instagram.
Emva kokungena kule menyu yeendlela zokukhetha, uya kuqaphela ukuba eyokuqala oza kuyibona iya kuba igama leakhawunti yakho ye-Instagram. Ke ngoko, olu iya kuba lukhetho onokuluguqula ngokudibanisa igama owuthandayo, ukuba nje liyafumaneka.
Njengoko sikuxelele ngaphambili, ukutshintsha igama lomsebenzisi kwi-Instagram ngumsebenzi olula. Nangona kunjalo, kuya kufuneka ukhumbule ukuba xa sele iguqulisiwe kukho ithuba lokuba abalandeli bakho bangakuchongi ngokulula. Cinga ngayo kakuhle ngaphambi kokuba uyitshintshe.
I-Instagram: Ungayifumana njani amagama abasebenzisi?
Okwangoku, kukho izixhobo ezininzi eziza kukwazisa yintoni igama lomsebenzisi kwi-Instagram Oko kuyafumaneka. Yiyo loo nto, namhlanje siza kukunika lonke ulwazi oludingayo ngezi zixhobo.
Nangona kubonakala kuyinto engaqhelekanga kuwe, iqonga le-Instagram lelona khetho lilungileyo xa uqinisekisa ukuba igama lomsebenzisi likho okanye alikho. Oku kuyasebenza nokuba okwangoku une-akhawunti kwaye ufuna ukulungisa igama lomsebenzisi, okanye ukuba ubhalisa okokuqala. Ukwenza oku, vele uye kwibhokisi yokubhalisa kwaye ufake igama lomsebenzisi, emva koko i-Instagram iya kukubonisa ukuqinisekiswa okuhambelanayo.
Esi sixhobo ngumvelisi wegama le-Instagram, oya kukuvumela ukuba ufumane amagama angama-30 akufutshane kwiakhawunti yakho, aqhelaniswe ngokupheleleyo neemfuno zakho.
Ukwenza oku, kuya kufuneka ugcwalise ibhokisi apho uya kubuzwa le ngcaciso ilandelayo:
Igama okanye alias.
Amanani okanye iileta
Nje ukuba ezi mfuno zigqityiwe, kufuneka ucofe iqhosha u "Spin". Emva koko, uya kufumana uluhlu olunamagama e-30 usebenzisa idatha oyinikeyo. Ke, i-SpinXO iba sisixhobo esigqwesileyo, esikuvumela ukuba udibanise amagama aphambili aziwayo kunye negama lakho okanye nedatha ekubonisa ngokobuntu bakho.
Ikwanika nethuba lokuvelisa amathuba amaninzi amagama ngendlela ofuna ngayo. Ukwenza oku, kufuneka ucofe iqhosha leSpin amaxesha amaninzi njengoko ubona kufanelekile. Sicebisa ukuba ukuba ufuna iingcebiso zamagama abhalwe igama lomntu, yongeza amagama aphambili achaza ubuntu bakho okanye izinto azithandayo ngokubanzi.
1 Yintoni igama lomsebenzisi kwi-Instagram? Khetha eyona ilungileyo!
2 Yintoni igama lomsebenzisi kwi-Instagram ebonisiweyo? Iingcebiso
2.1 Yintoni ofanele uyiphephe: Nika ingqalelo!
3 Igama lam lomsebenzisi alifumaneki: Ndenza ntoni?
4 I-Instagram: Ungatshintsha njani igama lomsebenzisi?
4.1 Amanyathelo okutshintsha igama lomsebenzisi
5 I-Instagram: Ungayifumana njani amagama abasebenzisi?
Ngubani onokubona amabali wam e-Instagram?